Ijaarsi piroojektii jallisii Gudar- Faaxoo dhibba irraa harki 10 ol adeemsifamuu , Ministirii Bishaanii, Jallisiifi Annisaatti, komishinarri itti-aanaan Koomishina Misooma Jallisii Injinar Saamu’eel Huseen beeksisan.
Piroojektiiwwan jallisii 9 kan ijaarsarra jiran yoo tahu, piroojektiiwwan haaraa sadii ammoo ijaarsisuuf dhaabbilee ijaaran waliin waliigalteerra gahameera jedhan, Injinar Saamu’eel.
“Marsaan jalqabaa ijaarsa Piroojektii Jallisii Gudar-Faaxoo yeroo xumuramu, qonnaan-bultoota aanaalee Shawaa Lixaa lamaan, Tokkee Kuttaayeefi Dirree Incinnii 3000 caalaniif faayidaa kenna” jedhan, Itti gaafatamaan Waajjira Qonnaa godinichaa.
Qonnaan bultootni aanaa Tokkee Kuttaayee yaada isaanii Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif kennanillee, yeroo ijaarsi jallisii kanaa xumuramu Waqtii Roobaa qofaa eegnee qotuurra yeroo lama sadii akka qotnu nu gargaaruu danda’a jedhan.
Naannoon Tigraay Filannoo Ofii Isaa Ni Geggeessa: Obbo Geetaachoo Redaa